Enwere ọtụtụ ọdịiche dị na ọrụ nke onye na -egwe ose, anyị na -ewebata isi ihe ole na ole iji nyochaa otu esi ahọrọ na ọrụ. 1. Nhọrọ nke isi ihe Mgbe ịzụrụ ose grinder, isi ihe kacha mkpa bụ ihe nke agụba nke ngwaahịa a. Ka ọ dị ugbu a, ihe ndị a na -ahụkarị bụ nkedo ígwè, igwe anaghị agba nchara na seramiiki. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ya na kichin na -ekpo ọkụ na iru mmiri, igwe anaghị agba nchara nke na -adịghị mfe nchara bụ ezigbo nhọrọ, enwere ike iji ya gwuo nnu nnu ....GỤKWUO »
Enwere ike ikwu na ose dị ka ihe na -atọ ụtọ na ọtụtụ efere. Ọ bụrụ na ị nwere igwe na -eghe eghe osere, ị nwere ike jiri ose a mịrị amị gbanye ncha na efere gị. Kedu otu esi ahọrọ ụdị na ike dị iche iche? Ọdịdị nke igwe egwe egwe 1. Ụdị ntụghari ntuziaka Ndị hụrụ nri n'anya ga -ahụrịrị ụda na -adọkpụ mgbe a na -agba ya ose, na isi ya na ya. Ọ bụ nnọọ ọkachamara iji! Agbanyeghị, ụdị peppe ...GỤKWUO »
Peugeot bụ n'ezie aha nna French. Ezinaụlọ Peugeot malitere imepụta igwe nri dị iche iche na -esi nri n'oge narị afọ nke 18. “Ụlọ ọrụ Peugeot” nke mepụtara ose na -ama jijiji mere ka ọtụtụ mmadụ nwute n'ihi aha ụlọ ọrụ ụgbọ ala Peugeot nke France. Ọ bụ otu ihe ahụ. N'ezie, ma ndị na -asacha ose Peugeot na ụgbọ ala Peugeot bụ otu ụlọ ọrụ. Peugeot bụ onye mbụ wepụtara igwe nsị. Ọ dịghị onye chere na ụlọ ọrụ a ga -emepụta ụgbọala n'oge ahụ. Ezinaụlọ Peugeot etinyela aka n'ichepụta ihe karịrị afọ 200. Ọtụtụ afọ gafere ...GỤKWUO »